Industrial kushandisa michina Cooling
AC dzinofambiswa panze cabinet kutonhora pana yokungoi- ta bara (US)
by pamusoro 18-10-24
XRow kutonhora mhinduro pane imwe kukonzera Internet webasa Provider kuti mashoko pakati (China)
Chikumbiro: The User mumwe mukuru Indaneti basa rubatsiro mu China, riri inozivikanwa kwayo siyana Internet Services. It vaiva vakaroorana Data nzvimbo pakati China achitsigira aro akakura date motokari. Envicool akava chikuru kutonhora mhinduro Provider kubva 2013 nokuda kwayo date muzinda wayo ...
CYBERMATE CRAC AT CHINA UNICOM Data MUZINDA (CHINA)
Chikumbiro: Yizhuang IDC, mumwe 5-nyeredzi IDC date centre vaiva ne China Unicom, ndiko aitungamirira date centre Achivakira muna Beijing China. Izvi date centre zvakare kuchaitwa zvakawanda zvinokosha date azvibatsire China Unicom. Envicool akapa 62 vamapoka 100kW CyberMate CRAC enyika iyi date muzinda 2013 ...
DC dzinofambiswa panze cabinet kutonhora pana Ooredoo (Iraq)